January 2021 | Taja Update
पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने २२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय
उद्योगी व्यवसायिका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन ः शेखर गोल्छा
सवारीमा जोरबिजोर नियम हट्यो, के खुले के अझै बन्द छन् ?
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले डायमण्ड परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा जेम्स ल्याब नभएका कारण डायमण्ड परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संघले नेपालमै जेम्स ल्याब स्थापना गर्न लागेको हो । बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघकी अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले आउँदो तीन महिना भित्रमा […]
नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरिएको छ । आज (बुधबार)देखि कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा पहिलो घेरामा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीहरुका लागि खोप लगाउन शुरु गरिएको हो । काठमाडौंको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट शुरु भएको खोप लगाउने अभियान देशैभर सञ्चालन भएको छ । […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाभित्र सम्पूणर् नेपालीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराईसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूणर् नेपालीलाई तीन महिनाभित्र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराईसक्ने बताउनुभएको हो । भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज खोप बुधबारदेखि देशभर लगाउन […]
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भएपनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एमसीसी बारे राजनीतिक रुपमा पक्ष र विपक्षमा धारणा बनाउँदा परियोजना आफै गलत हो की भन्ने भ्रम पनि सिर्जना भएको उपाध्यक्ष कँडेलले बताउनु भएको छ । परियोजनाको राजनीनिक पक्ष जे जस्तो […]
वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने भएको छ । बिहिबार नेपाल र इजरायलबीच नेपाली कामदार अपूर्ति गर्ने प्रोटोकल (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएसगै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने भएको हो । नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले […]